दिसम्बर 2016 - सत्य वेद पुुस्तकहरू
यो सामान्यतया स्वीकार गरिन्छ कि हामी कलियुग वा कलिको युगमा बाँचिरहेका छौं। यो अन्तिम युग हो जुन सत्य युग,,त्रेता युग र द्वापर युगबाट सुरू हुन्छ। यी चार युगको बीचमा साझा कुरा भनेको सत्यको पहिलो युग (सत्ययुग) बाट अहिलेको कलियुग सम्म स्थिर नैतिक र सामाजिक क्षय हो।
महाभारतमा मार्कंडेयले कलियुगमा मानव आचरणको वर्णन यसरी गर्छन् :
रिस, , क्रोध र अज्ञानता बढ्नेछ ।
धर्म, सत्यता,, शुद्धता , सहिष्णुता,, दया, शारीरिक शक्ति र स्मृति हरेक बित्दै जाने दिनको साथ घट्दै जान्छ।
बिना कुनै औचित्य संग मानिसहरूले हत्याको विचारहरू गर्नेछन र त्यसमा केही गलत देख्नेछैनन ।
वासनालाई सामाजिक रूपले स्वीकार्यको रूपमा हेरिने छ र यौन संभोग जीवनको केन्द्रीय आवश्यकताको रूपमा देखिने छ।
पाप द्रुत गतिमा बढ्नेछ,, जबकि सद्गुण बिलोप हुनेछ र फस्टाउन बन्द हुनेछ।
मानिसहरू मादक पदार्थहरू र लागूऔषधको दुर्व्यसनी हुन्छन्।
गुरुहरुलाई अब सम्मान गरिने छैन र तिनीहरुका बिद्यार्थीहरुले तिनीहरुलाई घाइते बनाउन कोशिस गर्नेछन्। उनीहरूको शिक्षाको अपमान हुनेछ, र कामका अनुयायीहरुको दिमाग सबै मानबजाती बाट नियन्त्रण गरिनेछ ।
सबै मानिसहरु आफैंलाई देवता वा देवहरु द्वारा वरदान भनेर घोषित गर्छन् र यसलाइ शिक्षाको सट्टा एक व्यापार बनाउनेछन।
मानिसहरु अब विवाह गर्दैनन् र एक अर्कासँग बस यौन सुखको लागि बस्दछन्।
मोशा र दश आज्ञाहरू
हिब्रू वेदले हाम्रो वर्तमान युगलाई पनि उस्तै तरीकाले वर्णन गर्दछ। हाम्रो पाप गर्ने प्रवृत्तिको कारण, निस्तार चाडको लगत्तै मिश्रबाट भाग्ने बित्तिकै परमेश्वरले मोशालाई दश आज्ञा दिनुभयो। मोशाको लक्ष्य इस्राएलीहरूलाई मिश्रदेशबाट डोर्याउनु मात्र थिएन, तर तिनीहरूलाई नयाँ जीवनशैलीमा डोर्याउनु पनि थियो। यसकारण निस्तार चाडको पचास दिन पछि इस्राएलीहरूले उद्धार पाए। सीनै पर्वत (माउन्ट होरेब ) जहाँ उनीहरूले परमेश्वरबाट व्यवस्था प्राप्त गरे। यो कानून कलियुगमा प्राप्त भयो कलि युगको समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि ।
मोशाले कुन आज्ञा पाए ? यद्यपि यो पूर्ण व्यवस्था एकदम लामो थियो, तर मोशाले पहिलो नैतिक आज्ञाहरु पर्मेश्वरद्वारा लेखिएको एक जोडा ढुँगाको पाटीमा ती आज्ञाहरु पाए, जसलाई दश आज्ञा वा (डिका्लाग) भनेर चिनिन्छ। यी दशले कानूनको सारांसलाई गठन गरे – सानो विवरण अघि नैतिक धर्म – र तिनीहरू अब कलियुगमा भएको सामान्य कुकर्महरूको पश्चात्ताप गर्न हामीलाई राजी पार्न परमेश्वरको सक्रिय शक्ति हो।
यहाँ दस आज्ञाको पूर्ण सूची छ, परमेश्वरले ढुँगामा लेखेका, अनि हिब्रू वेदमा मोशाले रेकर्ड गरेका छन्।
ब परमप्रभुले भन्नुभयो,
17 “तिमीहरूले छिमेकीहरूका घर, पत्नी, पुरूष अनि स्त्री, कमारा, कमारीहरू अथवा तिनीहरूको केही चीजहरूको चाहना गर्नु हुँदैन”मानिसहरू परमेश्वरसित
डराउँछन् प्रस्थान २०: १-१८
दश आज्ञा को मानक
आज हामी कहिलेकाँही बिर्सन्छौं कि यी आज्ञाहरू हुन्। तिनीहरू सुझावहरू हैनन्। न त ती सिफारिसहरू नै हुन्। तर कुन हदसम्म हामी यी आज्ञाहरू पालन गर्दछौं ? दश आज्ञा दिनु भन्दा पहिले तलका कुरा आउँदछ ।
3 तब मोशा परमेश्वरसित भेट गर्न पर्वतमा चढे। परमप्रभुले मोशासित कुरा गर्नु भयो अनि तिनलाई भन्नु भयो, “यी कुराहरू याकूबको ठूलो परिवारलाई भन,
4 ‘तिमीहरुले देख्यौ मैले तिमीहरूलाई मिश्रबाट चील झैं ल्याएँ।
5 यसकारण म अहिले तिमीहरूलाई मेरा आज्ञा पालन गर अनि मेरो करार अनुशरण गर भन्छु। यदि तिमीहरूले यसो गर्यौ भने तिमीहरू मेरो आफ्नै मानिसहरू हुनेछौ। सम्पूर्ण संसार मेरो हो।
यो दस आज्ञा पछि मात्र दिइएको थियो ।
7 मोशाले करारको पुस्तक मानिसहरूका निम्ति पढे अनि मानिसहरूले भने, “परमप्रभुले आदेश गर्नु भएको प्रत्येक चीज हामी गर्ने छौं।”
कहिलेकाँही स्कूलको परीक्षामा, शिक्षकले धेरै प्रश्नहरू दिन्छन् ( उदाहरणका लागि २० ) तर केही प्रश्नको मात्र उत्तर दिन आवश्यक पर्दछ। उदाहरणका लागि २० वटा प्रश्न मध्य कुनै १५ वटा प्रश्नहरू हामी छान्न सक्छौ । प्रत्येक विद्यार्थीले उत्तर दिनको लागि उसले\_ / उनले १५ ओटा सजिलो प्रश्नहरू लिन सक्दछन्। यस तरिकाले शिक्षकले परीक्षा सजिलो बनाउँछन्।
धेरैले दश आज्ञाको बारेमा पनि यसरी सोच्ने गर्दछन । उनीहरू सोच्दछन् कि परमेश्वरले , दश आज्ञा दिए पछि , “यी दश मध्ये कुनै ६ ओटा मात्र प्रयास गर्नुहोस्” जस्तो अर्थ लगाऊँछन । हामी यो तरिकाले सोच्छौं किनकि हामी परमेश्वरले हाम्रा ‘खराब कामहरू’ को बिरूद्ध हाम्रा ‘राम्रा कामहरू’ सन्तुलन गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्छौं। यदि हाम्रो राम्रो गुणहरू धेरै भयो वा हाम्रो खराब दोषहरू रद्द भयो भने हामी आशा गर्छौं कि यो परमेश्वरको कमाउनको लागि पर्याप्त छ।
यद्यपि, दश आज्ञाको इमानदार पठनले देखाउँदछ कि यो यसरी दिइएको थिएन। व्यक्तिहरूले सबै आदेशहरू मान्न र पालना गर्नु पर्थ्यो – सधै । यसको पूर्ण कठिनाइले धेरैलाई दश आज्ञाहरू खारेज गरेको छ। तर तिनीहरू कलियुगमा कलियुगले ल्याएको अवस्थाका लागि दिइयो।
दस आज्ञा र कोरोनाभाइरस परीक्षण
२०२० मा विश्वभरि फैलिरहेको कोरोनाभाइरस महामारीको साथ तुलना गरेर कलियुगमा कडा दश आज्ञाको उद्देश्यलाई हामी अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं। कोभिड -१९ एक रोग हो जुन ज्वरो ,खोकी र सास फेर्न गार्हो हुने लक्षण हुन्छ जुन कोरोनाभाइरस को कारणले हुन्छ – केहि सानो कुरा जसलाइ हामी देख्न सक्दैनौं।
मानौं कसैले कसैलाई ज्वरो लागेको छ र खोकी लागेको छ। यो व्यक्ति समस्या के हो भनेर आश्चर्यचकितमा पर्दछ। के उसलाई / उनलाई सामान्य ज्वरो आएको हो वा तिनीहरू कोरोनाभाइरस संक्रमित छन् ? यदि त्यसो हो भने यो गम्भीर समस्या हो – ज्यान जोखिममा पनि पर्न सक्छ । कोरोनाभाइरस धेरै छिटो फैलिन्छ र सबैलाई असर पुर्याउन सक्छ यो एक वास्तविक संभावना हो। पत्ता लगाउन उनीहरूले एउटा विशेष परीक्षण लिन्छन् जसले कोरोनाभाइरस उनीहरूको शरीरमा अवस्थित छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्दछ। कोरोनाभाइरस परीक्षणले उनीहरूको रोगको उपचार गर्दैन, ,यसले उनीहरुलाई निश्चित बताउँदछ यदि तिनीहरूसँग कोरोनाभाइरस छ जसको परिणाम स्वरूप कोविड १९ हुनेछ, वा उनीहरुलाई साधारण ज्वरो छ ।
यो दश आज्ञा को एक समान छ। कलियुगमा नैतिक पतन २०२० मा कोरोनाभाइरस जत्तिकै प्रचलित छ। सामान्य नैतिक दुराचारको यस युगमा हामी आफैं धर्मी छौं कि छैनौं वा हामी पापले दागी छौं भने पनि जान्न चाहन्छौं। यदि पाप र त्यसबाट आउने कर्मबाट स्वतन्त्र छौं वा पापले हामीमा नियन्त्रणमा पारेको छ भने उनीहरूको बिरूद्ध हाम्रो जीवनको अध्ययन गर्न दश आज्ञा दिइएको थियो । दश आज्ञाले कोरोनाभाइरस परीक्षण जस्तै कार्य गर्दछ – ताकि तपाईंलाई थाहा हुन्छ क यदि तपाईंसँग रोग (पाप) छ वा यदि तपाईं यसबाट स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।
पापको शाब्दिक अर्थ “हराइरहेको” छ जसको लक्ष्य हामी हामीबाट अरूलाई कसरी व्यवहार गर्छौं, आफैलाई र परमेश्वरलाई व्यवहार गर्छौं भनेर परमेश्वरले हामीबाट आशा गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो समस्या पहिचान गर्नुको सट्टा हामीले या त आफूलाई अरूसँग दाँज्न खोज्छौं (आफूलाई गलत मापदण्डको बिरूद्ध मापन गर्दछ), धार्मिक योग्यता प्राप्त गर्न कडा प्रयत्न गर्दछौं, वा त्यागेर र खुशीको लागि मात्र बाँच्दछौं। त्यसकारण परमेश्वरले दश आज्ञा दिनुभयो ताकि:
20 किनभने व्यवस्थालाई पछ्याएर कोही पनी परमेश्वरको अघि धर्मी हुन सक्तैन। व्यवस्थाले हाम्रो पापलाई मात्र औंल्याउँछ।
यदि हामीले दश आज्ञाको स्तर बिरूद्ध हाम्रो जीवन जाँच्दछौं भने यो कोरोनाभाइरस परिक्षण लिनु जस्तै हो जसले आन्तरिक समस्या देखाउँदछ। दस आज्ञाले हाम्रो समस्या ‘ठीक’ गर्दैन, तर समस्या प्रस्ट पार्दछ त्यसैले हामी परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको उपचार स्वीकार गर्नेछौं। आफैलाई धोकामा नपार्नुको सट्टा व्यवस्थाले हामीलाई आफूलाई राम्ररी हेर्नको लागि अनुमति दिन्छ।
पश्चातापमा परमेश्वरको उपहार दिइयो
परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको उपाय भनेको येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान द्वारा पाप क्षमाको उपहार हो – येशु सत्संग। जीवनको यो उपहार हामीलाई मात्र दिइएको छ यदि हामी विश्वास गर्छौं वा येशूका कामहरूमा विश्वास गर्छौं ।
16 हामी जान्दछौं, व्यवस्था मान्दैमा कोही पनि परमेश्वरको अघि धर्मी बन्दैनौं। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे मात्र मानिस परमेश्वरमा धर्मी बन्न सक्छ। यसकारण हामी पनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौं। अनि परमेश्वरको माध्यममा ख्रीष्टमा विश्वास राखेर नै हामी परमेश्वरको सेवक बनेकाछौं, व्यवस्था मानेर होइन्। किन कि व्यवस्था मानेर मात्र कोही पनि धर्मी बन्न सक्दैन।
गलाती २: १६
परमेश्वरको अगाडि श्री अब्राहम धर्मी ठहरिए हामीलाई पनि धार्मिकता दिन सकिन्छ। तर यसको लागि हामीले पश्‍चात्ताप गर्नुपर्छ। पश्चाताप प्रायः गलत अर्थमा बुझिन्छ, तर पश्चात्तापको अर्थ भनेको केवल ‘हाम्रो दिमाग बदल्नु’ हो पापबाट फर्कनु र परमेश्वर र उहाँले दिनलागेको वरदानतिर फर्कनु हो। जसरी वेद पुष्टकन (बाइबल) ले वर्णन गर्दछ:
19 यसैले तिमीहरूले आफ्ना हृदयहरू र जीवन परिवर्तन गर्नै पर्छ! परमेश्वर तर्फ र्फक अनि उहाँले तिमीहरूको पापहरूलाई क्षमा दिनुहुन्छ। ()
तपाईं र मेरो लागि प्रतिज्ञा यो हो कि यदि हामीले पश्चात्ताप गर्यौं, र परमेश्वरमा फर्क्यौं भने, हाम्रा पापहरू हाम्रा विरुद्धमा गनिने छैन र हामीले जीवन प्राप्त गर्नेछौं। परमेश्वरले ,आफ्नो ठूलो कृपामा, हामीलाई कलियुगमा पापको परीक्षण र एउटा खोप दुवै दिनुभएको छ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 30/12/2016 16/09/2020 श्रेणिया तपाई को सहायता को लागी हाम्रो आवश्यकता (our need), बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स इस प्रविष्टि में पोस्ट किया गया हमारी जरूरत के लिए मदद और टैग कोरोनवायरस, कलियुग, कलियुग क्या है, दस आज्ञाएँ, विधि का विधान
कालीलाई प्रायः मृत्युको देवी भनेर चिनिन्छ, तर अधिक सही शब्द संस्कृत शब्द काल बाट आउँदछ जसको अर्थ समय हो । कालीको प्रतिमाहरू डरलाग्दो हुन्छ किनकि उनलाई अक्सर टाउकोको हार र काटिएको हातहरुको जामा अथवा फराक लगाएर चित्रित गरीन्छ र रगत बगिरहेको, ताजा काटिएको टाउको, एउटा खुट्टा लम्पसार परेको श्रीमान् शिवको शरीरमा । कालीले हामीलाई मृत्युको अर्को कथा हिब्रू वेद – बाइबलमा बुझ्न मद्दत गर्दछ।
काली पीडित लम्पसार परेको शिवमा काटिएको टाउको र अंगहरूले सजिएकि
कालीको पौराणिक कथाले बताउँछ कि दानव-राजा महिषासुराले देवताहरूको बिरूद्ध युद्धको धम्की दिए। त्यसैले उनीहरूले कालीलाई तिनीहरूका सारबाट सिर्जना गरे। कालीले क्रुद्ध हुँदै निर्दयी तरिकाले राक्षसी सेनाको ठूलो रक्तपात गरिन र उनको मार्गमा भएका सबैलाई नष्ट गरिन्। उनको युद्धको चरमोत्कर्ष राक्षस-राजा महिषासुरसँगको युद्ध थियो जसलाई उनले एक हिंसात्मक भिडन्तमा नष्ट गरिन्। कालीले आफ्ना विपक्षीहरूलाई रक्तपातपूर्ण शरीरका भागहरूमा परिणत गर्दै नष्ट पारिन । तर उनीलाई सबै रगतले उत्तेजक बनायो कि उनले मृत्यु र विनाशको बाटोलाइ रोक्न सकिनन । देवताहरूले उनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन जबसम्म शिव युद्धभूमिमा स्वेच्छाले गतिहीन भएर लम्पसार परेनन । त्यहि बेला आफ्ना मृत विरोधीहरूको टाउको र हातले सुशोभित कालीले प्रवण शिवमा एउटा खुट्टा राखिन् र उनलाई हेरिन् त्यसपछि उनी आफ्नो होशमा फर्कीन र विनाशको अन्त्य भयो।
हिब्रू वेदमा निस्तारको विवरणले काली र शिवको कथा दर्पण गर्दछ। निस्तारको कथनमा एक स्वर्गदूतको अभिलेख छ जसले कालीले जस्तै एउटा दुष्ट राजाको सामना गर्न व्यापक मृत्यु ल्यायो। जसरि कालीलाई रोक्न जसरी शिवले स्वैच्छाले कदम चलाए, यो मृत्युको दूतलाई कुनै पनि घरबाट रोक्नको लागि निर्दोषको बलिदान गरिएको थियो । जहाँ असहाय भेडाको बलिदान गरिएको छ। महात्माहरूले हामीलाई बताउँछन कि यस काली कथाहरूको अर्थ अहंकारमाथीको विजयसँग सम्बन्धित छ। निस्तारको कथनको अर्थ नासरतका येशू आउने घटनालाई – येशू सत्संग – लाई औंल्याएर र आफ्नो अहंकार त्यागेर हाम्रो तर्फबाट आफूलाई बलिदान दिएर पनि आफ्नो नम्रता दर्शाउनु हो। निस्तारको कथा जान्न लायकको छ।
निस्तार चाडको स्थापना
हामीले हेर्यौं कि कसरी ऋषि अब्राहम द्वारा उसको पुत्र इसहाकको बलिदान येशूको बलिदान तर्फ संकेत गर्द थियो। अब्राहमको मृत्यु पश्चात्, उसको पुत्र इसहाकको वंशज, जसलाई अहिले इस्राएली भनि पुकारिन्छ, एउटा ठूलो सँख्याको जाति बनेका थिए तर साथै उनीहरु मिश्रमा दास बनेका थिए।
अब हामी एउटा निकै नै ठूलो नाटकीय संघर्षमा आउद छौँ त्यो एउटा व्यक्ति जसलाई मोशा भनिन थियो, द्वारा केन्द्रित छ र जसको उल्लेख हिब्रू वेद बाइबलको प्रस्थान नामक पुस्तकमा लिपिबद्ध छ। यसको नाम यसकारण यस्तो छ किनकी यसमा यो वृतान्त पाइन्छ कि कसरी मोशा अब्राहमको 500 वर्ष पश्चात्, लगभग 1500 ईसा पूर्वमा इस्राएलिहरुको मिश्रको दासत्व बाट निक्लेर आए। मोशाको सृष्टिकर्ता परमेश्‍वर (प्रजापति) द्वारा आज्ञा दिइएको थियो कि उनी मिश्र फारो (शासक) को सामना गरुन र त्यसको परिणाम मोशा र फारोको इच्छाहरुमा प्रतिस्पर्धाको रूपमा निक्लियो। यस प्रतिस्पर्धाले मिश्रको विरोधमा दस विपत्तिहरु वा प्रकोपहरुलाई पनि उत्पन्न गर्यो। तर फारो मिश्रीहरू लाई छोडी दिनको लागि सहमत भएनन त्यसैले परमेश्‍वर 10औं र अन्तिम विपत्ति उनीहरुमाथि ल्याउदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईं 10औं विपत्तिको पूरै वृतान्तलाई यस लिंकमा यहाँ प्रस्थानमा पढ्न सक्नु हुन्छ किनभने यहाँ तल दिएइको विवरणले तपाईंको सहायता गर्ने छ।
परमेश्‍वर द्वारा 10औं विपत्तिको आज्ञा यो थियो कि मृत्युको दूत (आत्मा) मिश्रको प्रत्येक घरको अगाडी बाट निस्किने छ। त्यस देशको पूरै भूमिमा एउटा विशेष रात्रिमा प्रत्येक पहिलौटे त्यी सबै मानिसहरुको घरहरुलाई छोड़र मर्ने छन जहाँ निर एउटा भेडाको बलिदान गरिनेछ र त्यसको रगतलाई उसको घरको द्वारमा लगाएको हुनेछ। फारोको विनाश उसको पुत्र र उसको सिंहासनको उत्तराधिकारीलाई मारेर हुनेछ, यदि उसले आज्ञा पालन गर्दैन र भेडाको रगतलाई द्वारमा लगाउदैन। र मिश्रको प्रत्येक घर पहिला जन्मेको पुत्रलाई गुमाउने छ यदि त्यसले भेडाको बलिदान न गरि र त्यस रगतलाई द्वारको माथि लगाउदैन। यस प्रकार मिश्र राष्ट्रले संकटको सामना गर्ने छ।
तर त्यो घर जहाँ निर एउटा भेडाको बलिदान गरि र त्यसको रगत द्वारमाथि लगाएकाहरु को लागि यो प्रतिज्ञा दिइएको थियो कि यस्तो प्रत्येक घर सुरक्षित रहनेछ। मृत्युको दूतले त्यस घरलाई छोडी दियो। यस प्रकारले त्यस दिनलाई निस्तार-चाड भनि पुकारिएको थियो (किनकी मृत्युले त्यी सबै घरहरुलाई छोडी दिएको थियो जहाँ निर द्वारहरुमा रगतलाई लगेका थिए)।
अब जसले यस कहानीलाई सुनेका छौ मानौ कि द्वारहरुमा लागेको रगतको निशान मृत्युको दूतको लागि निशान थियो। तर 3500 वर्ष पहिले लेखिएको वृतान्तमा जिज्ञासाले भरिएको विवरणको माथि ध्यान दिऊ।
परमेश्‍वरले मोशालाई भन्नुभयो…. “…म परमप्रभु हुँ। तिमीहरु बसेको घरहरुमा त्यो [निस्तार-चाडको भेडा] रगत तिमीहरुको निम्ति
तिमीहरुको लागि चिन्ह हुनेछ; अर्थात् जब म त्यो रगत देख्ने छु तब तिमीहरुलाई चाहिँ छोडी दिनेछु। (प्रस्थान 12:13)
यद्यपि परमेश्‍वर द्वारको माथि रगतलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, र जब उहाँले त्यसलाई देख्नु हुनेछ तब मृत्यु त्यस घरलाई छोडी दिनेछ, रगत परमेश्‍वरको लागि चिन्ह थिएन। यो निकै नै स्पष्टता संग भन्दछ, कि रगत ‘तपाईंको लागि एउटा चिन्ह’– अर्थात् मानिसहरुको लागि चिन्ह थियो। यो साथै नै हामी सबैको लागि पनि चिन्ह हो जसले यस वृतान्तलाई पढ्छन्। तर कसरी यो एउटा चिन्ह हो? एउटा महत्वपूर्ण सुराग यो हो कि यस घटना घटित हुनु पश्चात् परमेश्‍वरले उनीहरुलाई यो आज्ञा दिनुभयो:
यस कारण त्यो दिन तिमीहरुले पुस्तौं सम्म एउटा रही रहने विधि स्वरूप मान्नु। जब तिमीहरु परमप्रभुले प्रतिज्ञा गरेर दिनु भएको देश पस्ने छौँ… तब तिमीहरुले यो चाड मान्नु… यो परमप्रभुको निस्तार-चाडको बलिदान हो (प्रस्थान 12:17)
निस्तार-चाडमा भेडाको साथमा एउटा यहूदी व्यक्ति
इस्राएलिहरुलाई प्रत्येक वर्षको त्यसै दिन निस्तार-चाड मनाउने आज्ञा दिइएको थियो। यहूदी पात्रो, चन्द्रमा आधारित पात्रो हुनुको कारण, पश्चिमी पात्रो भन्दा थोरै भिन्न छ, यदि तपाईं यसको आंकलन पश्चिमी पात्रो अनुसार गर्नु हुन्छ भने तब तपाईंले यस्तो पाउनु हुन्छ कि वर्षमा दिनहरुको गिन्ती प्रत्येक वर्ष परिवर्तित हुदै जाद्छ। तर आजको दिन पनि, लगभग 3500 वर्ष पश्चात्, यहूदी मानिसहरु निरन्तर निस्तार-चाड अर्थात् पर्वलाई प्रत्येक वर्ष त्यही दिन दिइएको आज्ञा पालन गर्दै त्यस घटनाको स्मृतिमा मनाउद छन्।
निस्तार-चाडको चिन्ह प्रभु येशूको तर्फ संकेत गर्दै थियो
र इतिहासमा यस पर्वको खोजी गर्दा हामी केहि आसाधारण कुराहरुलाई नोट गर्न सक्छौं। तपाईंले यो सुसमाचारहरुमा पनि ध्यानले नोट गर्न सक्छौं कि जहाँ निर यो येशूलाई पक्राउमा पर्नु र परिक्षामा पर्नु (प्रथम निस्तार-चाडको विपत्तिको 1500 वर्ष पश्चात्) को विवरणहरुलाई उल्लेख गरेको छ:
“तब तिनीहरुले येशूलाई… रोमी सम्राट [पिलातस] को महल मा लागे… तर बितुलीएर निस्तार-चाडको भोज खान पाउदैनौं भनेर डरले तिनीहरु महल भित्र पसेन्न”… [पिलातस]ले [यहूदी अगुवहरुलाई] भने “…निस्तार-चाडमा एक जना मैले तिमिहरुक्को निम्ति छोडी दिने तिमीहरुको प्रथा छ। अत: त के तिमीहरु चाहन्छौँ, कि ‘यहूदिहरुक राजा’ लाई छोडीदिऊँ?” तब तिनीहरुले फेरी यसो भन्दै कराए, “यसलाई होइन…” (यूहन्ना 18:28, 39-40)
दोस्रो शब्दहरुमा, येशूको पक्राई पछि र कूस्रीकरणको लागि यहूदी पात्रो अनुसार ठीक निस्तार-चाडको दिन मा नै पठाईएको थियो। येशूलाई दिइएको एउटा शिर्षक मध्य एउटा यो थियो
भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफुतिर आइरहनुभएको देखेर भएँ, “हेर, संसारको पाप उठाई लैजाने परमेश्‍वरका थुमा। उनी उहाँनै हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भनेको थिए, ‘म पछि एक जना मानिस आउनु हुनेछ, जो म भन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किन भने उहाँ म भन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो’” (यूहन्ना 1:29-30)
यहाँ निर हामी हेर्न सक्छौ कि कसरी निस्तार चाडको नाटक हाम्रो लागि एउटा चिन्ह हो। येशू, ‘परमेश्‍वरको भेडा’ लाई वर्षको ठीक त्यसै दिन क्रूसित (अर्थात् बलिदान) गरिएको थियो जब सबै यहूदी प्रथम निस्तार चाडको स्मरणमा भेडाको बलिदान गर्दथे जो 1500 वर्ष पहिले घटित भएको थिए। यो दुइ छुट्टिहरुले वार्षिक समयको व्याख्या गर्दछ जुन प्रत्येक वर्ष – समान्तर रूपमा घटित हुँदछ जसमा हामीहरुले कम नै ध्यान दिन्छौ र यहाँ सम्म कि धेरै कम सोध्छौ कि ‘किन’ यस्तो घटित हुन्छ? यहूदिहरुको निस्तार-चाड प्रत्येक वर्ष लगभग त्यसै समय घटित हुन्छ जब ख्रीष्टियनको ईस्टर पर्व आउद – आफ्नो पात्रोलाई जाचँ गरुन। (प्रत्येक 19औ वर्षको एउटा महिनामा विचलन यहूदिहरु पात्रोको चन्द्र-आधारित लीप वर्षको चक्रको कारण हुन्छ)। त्यसैले नै ईस्टर अघि को तर्फ बढ्द छ किनकी यो निस्तार-चाडको माथि आधारित छ र निस्तार-चाडको समय यहूदी पात्रो द्वारा निर्धारित हुँदछ जुन वर्षको गणना पश्चिमी पात्रो भन्दा भिन्न रूपमा गर्दछ।
अब एक मिन्टको लागि यो विचार गरौ ‘चिन्ह’ ले के गर्दछ। तपाई केहि चिन्हहरुलाई तल यहाँ निर हेर्न सक्नु हुन्छ।
नेपालको एउटा चिन्ह
व्यावसायिक चिन्हहरुले हामीलाई मैक्डोनाल्डस् र नाईकलाई सोच्नको लागि मजबूर गर्दछन
झंडा वा ध्वजा नेपालको चिन्ह वा प्रतीक हो। हामी केवल एउटा सिधुरी र एउटा निलो पट्टीलाई नै त्रिकोणको रूपमा मात्र न ‘हेरौ’। होइन, जब पनि हामी झन्डालाई हेर्दछौं, हामी नेपाललाई सोच्छौ। ‘सुनौलो चापको आकार’ हामीलाई मैक्डोनाल्डस् लाई सोच्न मजबूर गर्दछ। टेनीस खिलाड़ी नाडॉल को टाउकोमा बँधीएको पट्टीमा दिएको चिन्ह
‘✔’नाईकको लागि सोच्नमा मजबूर गर्दछ। नाईकले चाहन्छ कि हामी उनीहरुको बारेमा सोचौ जब पनि हामी नाडॉलको टाउकोमा बाँधेको पट्टीमा दिएको चिन्हलाई देख्दछौँ। दोस्रो शब्दमा, चिन्ह हाम्रो मनहरुको लागि यस्तो संकेत हो जसले हाम्रो सोचलाई इच्छित गरिएको वस्तुको तर्फ निर्देशित गर्दछ।
हिब्रू वेदको प्रस्थान मा दिइएको निस्तार-चाडको वृतान्त स्पष्ट रूपले यो भन्दछ कि चिन्ह मानिसहरुको लागि दिइएको थियो, न कि सृष्टिकर्ता परमेश्‍वरको लागि (यद्यपि त्यो अहिले पनि रगतको तर्फ हेर्नु हुनेछ र यदि उहाँले यसलाई त्यस घरहरुमा देख्नु हुनेछ तब उनीहरुलाई छोडी दिनु हुनेछ)। कुनै पनि दिइएको चिन्ह जस्तै, जब हामी निस्तार-चाडको तर्फ हेर्दछौँ तब त्यो हाम्रो मनहरुको सोच बाट के इच्छा राख्दछ? भेडाको बलिदानको उल्लेखनीय समय त्यही दिन थियो जुन दिन येशूको बलिदान भएको थियो, त्यसैले येशूको बलिदान तर्फ एउटा संकेत गर्ने हुनु पर्दछ।
यसले हामीलाई मनहरुमा त्यसै गरी कार्य गर्दछ जस्तै मैले तल दिइएको चित्रमा देखेको छु। चिन्ह यहाँ निर येशूको बलिदानको तर्फ संकेत गर्नको लागि दिइएको थियो।
निस्तार-चाड प्रति येशूको बलिदानको त्यस समयमा घटित हुने एउटा चिन्ह थियो
निस्तार गर्न येशूको बलिदानको सही समय एक साइन छ
प्रथम निस्तार-चाडको समय भेडाको बलिदान भएको थियो र रगत लगाएको थियो ता कि मानिसहरुलाई बचाउन सकिओस। र यस प्रकार, यो चिन्ह येशूको तर्फ हामीलाई यो बताउनको लागि संकेत गर्दछ कि, ‘परमेश्‍वरको भेडा’ मृत्युको लागि बलिदान हुनको लागि दिइएको थियो र उहाँको रगत बगाईयो ता कि हामीले जीवनलाई प्राप्त गर्न सकौं।
हामीले अब्राहमको चिन्ह लेखमा देखेका थियौं जुन स्थानमा अब्राहमको परीक्षा उसको पुत्रलाई मोरीयाह पहाड़को माथि बलिदान द्वारा गरिएको थियो। त्यहि निर एउटा भेडालाई मारिएको थियो ता कि अब्राहमको पुत्र जीवित रहोस। मोरीयाह पहाड़
अब्राहमको चिन्ह त्यस स्थानको तर्फ संकेत गर्दै थियो
ठीक त्यही स्थान थियो जहाँ निर येशूको बलिदान भएको थियो। यो चिन्ह हामीलाई त्यस स्थान को तर्फ संकेत गर्दै उहाँको मृत्युको अर्थलाई ‘हेर्न’ को लागि दिइएको थियो। निस्तार-चाडमा हामीले एउटा अर्को सूचकलाई वर्षको ठीक त्यही दिन लाई येशूको बलिदान तर्फ संकेत गरेको पाइन्छ। एक पटक फेरी भेडाको बलिदानको उपयोग – यो देखाउनको लागि गरिएको थियो कि यो येशूको बलिदान तर्फ संकेत गर्दै- घटनाको एउटा संयोग मात्र होइन। दुई भिन्न तरीकाहरुले (स्थानद्वारा र समयद्वारा) पवित्र हिब्रू वेदमा दिइएको दुई अति महत्वपूर्ण पर्व येशूको बलिदानको तर्फ स्पष्ट संकेत गर्दछ। म इतिहासमा कुनै पनि अन्य व्यक्तिको बारेमा सोच्न सक्दिन कि जसको मृत्युको प्रतिछाँया यस प्रकारले नाटकीय तरीकामा यसरी समानताहरुको साथ दिइएको छ। के तपाईंले सोच्न सक्नु हुन्छ?
यो चिन्ह यसकारण दिइएको थियो कि हामी त्यस निर्धक्क हुन् सकौं कि येशूको बलिदान वास्वतमा परमेश्‍वरको तर्फबाट योजनाबद्ध र ठहराइएको थियो। यो उदाहरणको रूपमा दिइएको छ ता कि हामी यो कल्पना गर्न सकौं कि कसरी येशूको बलिदानले हामीलाई मृत्युबाट बचाउदछ र पापबाट शुद्ध गर्दछ– परमेश्‍वरको तर्फबाट त्यी सबैलाई दिइएको उपहार हो जसलाई सबैले प्राप्त गर्न सक्छौं।
लेखक Ragnarप्रकाशित 29/12/2016 11/05/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स निस्तार-चाड र कर्म को अर्थ, पासओवर, मोशा र कर्मा, मोशा र पसव
महाभारतले सन्तानहीन राजा पाण्डुले सामना गरेको संघर्षको बखान गर्दछ। ऋषि किन्दामा र उनकी श्रीमतीले सावधानीपूर्वक प्रेम गर्नका लागि हिरणको रूप लिएका थिए । दुर्भाग्यवस, राजा पाण्डु त्यतिखेर शिकार गर्दै थिए र संयोगबस तिनीहरूलाई धनु लाग्यो । क्रोधित, किन्दामाले राजा पाण्डुलाई अर्को पटक आफ्नी पत्नीहरूसित यौन सम्बन्ध राख्दा मर्ने श्राप दिएका थिए । यसरी राजा पाण्डुलाई कुनै पनि बच्चा र उनका सिंहासनमा उत्तराधिकारी हुनबाट रोकियो । कसरी उनको वंशलाई यो खतराबाट बचाउने ?
पछिल्लो पुस्ता उही समस्याको समाधान गर्न राजा पाण्डुको जन्म आफै निराशाजनक कार्य थियो। भूतपूर्व राजा, विचित्रवीर्य, ​​नि: सन्तान मरेका थिए त्यसैले एक उत्तराधिकारीको आवश्यक पर्‍यो। विचित्रवीर्यकी आमा सत्यवतीको विवाह विचित्रवीर्यका बुबा राजा शान्तनुसँग विवाह हुनु अघि उनको एउटा छोरा थियो । यस छोरा, व्यासालाई, विचित्रवीर्यका विधवा अम्बिका र अम्बालिकालाई गर्भधारण गर्न आमन्त्रित गरिएको थियो । पाण्डु व्यासा र अम्बालिका बीचको मिलनबाट जन्मेका थिए । राजा पाण्डु यस प्रकार व्यासका जैविक छोरा थिए तर नियोग मार्फत पूर्व राजा विचित्रवीर्यका उत्तराधिकारी थिए, जहाँ पतिले मरेपछि वैकल्पिक पुरुषले बच्चा जन्माउन सक्दछन् । ठूलो आवश्यकताले निराशाजनक कार्यको लागि बोलाएको थियो ।
राजा पाण्डु पनि त्यस्तै समस्याको सामना गरिरहेका थिए किनभने किन्दामाले उनीमाथि गरेको सरापको कारण । के गर्ने? फेरि, निराशाजनक कार्यको आवश्यक थियो । पाण्डुकी श्रीमती, रानी कुन्ती (वा पृथ) लाई एक गोप्य मन्त्र थाहा थियो (ब्रह्माणा दुर्वासाले उनको बाल्यकालमा प्रकट गरेको) उनको देवताले उनलाई गर्भधारण गराए । त्यसैले रानी कुन्तीले यो गोप्य मन्त्र प्रयोग गरी तीन जना पाण्डव भाइहरू: युधिष्ठिर, भीम र अर्जुनलाई गर्भधारण गरिन । रानी कुन्तीकी सह-पत्नी रानी माद्रीले कुन्तीबाट यो मन्त्र प्राप्त गरे र उनले पाण्डव भाइहरू नकुला र सहदेवलाई पनि जन्म दिइन ।
निसन्तानको बाँकी जीवन जोडीहरूलाई ठूलो दु: ख ल्याउन सक्छ । देशको लागि उत्तराधिकारी खतरामा छ भन्ने कुरा सहन अझै कठिन हुन्छ । चाहे वैकल्पिक साथिहरू खोज्ने हो वा गोप्य मन्त्र लागू गरेर देवहरुलाई क्रियामा सार्न, यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय रहन एक कठिन विकल्प हो ।
ऋषि अब्राहामले ४००० वर्ष पहिले यस्तै अवस्थाको सामना गरे । उनले समस्या समाधान गर्ने तरीकालाई हिब्रू वेद पुष्थकन (बाइबल) मा एक नमुनाको रूपमा दिइएको छ त्यसैले हामीले यसबाट सिक्न बुद्धिमानी हुनेछ।
उत्पत्ति १२ मा उल्लेख गरिएको प्रतिज्ञादेखि अब्रामको जीवनमा कैयौँ वर्ष बितेर गएका छन् । अब्राम कनान देशमा गएका थिए (प्रतिज्ञाको भूमि) त्यस प्रतिज्ञाको आज्ञाकारितामा जो आज इस्राएल हो । उनले चाहेको छोरोको जन्म जसद्वारा यस प्रतिज्ञा पूरा हुन्थ्यो यसबाहेक अन्य धेरै घटनाहरू उनको जीवनमा घटे । त्यसैले हामी यहाँ अब्रामले गरेको गुनासोलाई लिदँछौँ :
त्यसपछि दर्शनमा अब्रामकहाँ परमप्रभुको यो वचन आयोः
“अब्राम तँ नडरा ।
तेरो ढाल म नै हुँ,
र तेरो इनाम अत्यन्त ठूलो हुनेछ ।”
तर अब्रामले भने, “हे परमप्रभु परमेश्‍वर तपाईँले मलाई के दिनुहुन्छ र ? किनभने म सन्तानविहीन नै छु, मेरो घरको उत्तराधिकारी दमस्कसको एलीएजर हुनेछ ।” अनि अब्रामले फेरि भने, “हेर्नुहोस् तपाईँले मलाइ सन्तान दिनुभएन, र मेरो घरमा जन्मेको दास नै मेरो उत्तराधिकारी हुनेछ ।” (उत्पत्ति १५:१—३)
अब्राम त्यस समय परमेश्‍वरले ‘ठूलो जाति’ खडा गर्नेछु भनी ऊसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको भूमिमा पाल टाँगेर बस्दै आइरहेका थिए । तर त्यस समयसम्म केही पनि भएका थिएन र त्यस समयसम्म ऊ ८५ वर्ष बूढो भइसकेका थिए । परमेश्‍वरले ऊसँग गरेको प्रतिज्ञा पूरा नगरिरहेकोमा उसले परमेश्‍वरसँग गुनासो पोखे । यस विषयमा उनले परमेश्‍वरसँग गरेको वातचित यसरी अघि बढ्दछ :
तब परमप्रभुको यो वचन फेरि तिनीकहाँ आयो : “यो मानिसचाहिँ तेरो उत्तराधिकारी हुनेछैन, तर जो तेरो आफ्नै छोरा हुन्छ त्यही नै तेरो उत्तराधिकारी हुनेछ ।” अनि उहाँले तिनलाई बाहिर लगेर भन्नुभयो, “आकाशतिर हेरेर तारा गन्न सक्छस् कि सक्दैनस्, गनिहेर ।” उहाँले तिनलाई भन्नुभयो । “तेरा सन्तान पनि त्यस्तै हुनेछन् ।” (उत्पत्ति १५:४—५)
परमेश्‍वर र अब्रामको वार्तालापमा आकाशका अनगिन्ती ताराहरू झैँ —साँच्चै अति धेरै, तर गन्न नै गाह्रो हुनेगरी अब्राहामका सन्तान हुनलाई तिनले एउटा छोरा प्राप्त गर्नेछन् भनी घोषणा गर्दै परमेश्‍वरले आफ्नो पतिज्ञालाई नयाँ गर्नुभयो ।
अब्राहामको प्रतिजवाफ : पूजाको जस्तो स्थायी प्रभाव
अब यस कुराको बल भने अब्राहामको गोजीमा थियो । यस नयाँ गरिएको प्रतिज्ञाप्रति उनले कसरी प्रतिजवाफ दिन्छ होला ? जेसुकै यसको पछि आउँछ त्यो सबभन्दा बढि महत्वपूर्ण वाक्यहरूमध्ये एक हुन आउँछ (किनकि यस वाक्यलाई अन्तमा कैयौँ पटक उद्धृत गरिन्छ) । यसले एउटा अपरिवर्तनीय वा स्थीर सत्यलाई बुझ्नको लागि आधार खडा गर्दछ । यसले यसरी भन्दछ कि :
अनि तिनले परमप्रभुमाथि विश्वास गरे, र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो । (उत्पत्ति १५:६)
यदि हामी यो वाक्यमा नामको ठाउँमा सर्वनाम राखेर बदल्छौँ भने यसलाई बुझ्न सायद अझ सरल हुन्छ, र यसलाई यसरी पढ्न सकिन्थ्यो :
अब्रामले परमप्रभुमा विश्वास गरे, र यो धार्मिकताको रूपमा परमप्रभुले अब्राममाथि थपिदिनुभयो । (उत्पत्ति १५:६)
यो एउटा यस्तो सानो र सामान्य वाक्य हो । यो कुनै ठूलै समाचारको प्रदर्शनी बिना नै आउँने र जाने गर्दछ, त्यसैले हामी यसलाई छुटाउने गर्दछौँ । तर यो वास्तवमा महत्वपूर्ण छ—र यसमा अनन्तताको बीउ निहित छ । किन त ? किनभने यो सानो वाक्यमा अब्राहामले ‘धार्मिकता’ प्राप्त गर्दछ । यो एउटा पूजाको पूण्य प्राप्त गरेजस्तो हो जुन कहिल्यै पनि नाश भएर वा हराएर जानेछैन । धार्मिकता त्यस्तो एक— मात्र एक—गुण हो जुन हामीलाई परमेश्‍वरको अगाडि ठीकसित खडा हुनको लागि आवश्यक पर्दछ ।
हाम्रो समस्याको समिक्षा : भ्रष्टाचार
परमेश्‍वरको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यद्यपि हामीचाहिँ परमेश्‍वरको स्वरूपमा बनिएका थियौँ तर त्यस्तो केही चीजले त्यस स्वरूपलाई भ्रष्ट तुल्यायो । अब यसको न्यायचाहिँ यो दिइएको छ कि :
परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्‍वरलाई खोज्ने कोही छ ? किनकि तिनीहरू सबै कुबाटोतिर लागेका छन् , तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन् । कसैले असल गर्दैनन् अहँ असल गर्ने एकजना पनि छैन । (भजनसंग्रह १४:२—३)
यो भष्टतालाई हामी सहजै बुझ्न सक्दछौँ । यसकारणले गर्दा कुम्भमेला पर्वजस्ता थुप्रै पर्वहरूमा राम्रै तवरले भाग लिने गरिन्छ किनभने त्यसबाट हाम्रो पाप धोइ पखालिन्छ भनी हामी आवश्यक ठान्दछौँ । प्ररथा स्नाना (वा प्रतासना) मन्त्रले पनि यो हामी स्वयम्को बारेमा हो भनी यस विचारलाई व्यक्त गर्दछ :
म एक पापी हुँ । म पापको परिणाम हुँ । म पापमा नै जन्मिए । मेरो प्राण पापको अधिनमा छ । म सबभन्दा खत्तम पापी हुँ । हे परमप्रभु जसको आँखाहरू सुन्दर छन्, मलाईँ बचाउँनुहोस्, हे बलिदानका परमप्रभु ।
हाम्रो भ्रष्टताको परिणामचाहिँ हामीले आफूलाई धार्मिक परमेश्‍वरबाट अलग भएको पाउनु हो किनभने हामी आफैसँग धार्मिकता छैन । हाम्रो भष्टता हाम्रो नकारात्मक कामको वृद्धि गर्नेमा नै देखिन्छ—जसको सचेतता व्यर्थता अनि मृत्युको फल काट्नेमा नै हुन्छ । यदि तपाईँलाई शंका लाग्छ भने कुनै समाचारको मुख्य अंशलाई लिनुहोस् र बितेका २४ घण्टामा मानिसहरूका साथमा केकस्ता कुराहरू भए सो हेर्नुहोस् । हामी जीवनको निर्माण गर्ने जीवन निर्माताबाट छुट्टिएका छौँ र वेद पुस्तक (बाइबल) को ऋषि यशैयाको वचन सत्य सावित भएको छ ।
हामी सबै अशुद्ध मानिस झैँ भएका छौँ, र हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहोर झुत्रा झैँ भएका छन्; हामी सबै पातझैँ ओइलाइहाल्छौँ र हाम्रा पापले हामीलाई बतासले झैँ उड्डाइलैजान्छ । (यशैया ६४:६, ७५० ईसापूर्वमा लेखिएको)
अब्राहाम र धार्मिकता
तर यहाँ परमेश्‍वर र अब्राहामको बीचमा भएको वातचितमा सुस्तरी चिप्लिएको र हामीले झण्डै गुमाउँन सक्ने कुरोचाहिँ अब्राहामले ‘धार्मिकता’ प्राप्त गरेको थियो भन्ने परमेश्‍वरको घोषणा हो —जसरी परमेश्‍वरले अपेक्षा गर्नुभएको थियो । त्यसैले यो धार्मिकता प्राप्त गर्नको लागि अब्राहामले के ‘गरे’ त ? एकपटक फेरि, पृथकतवरबाट हामी हाम्रो मुख्य कुरालाई गुमाउनसक्ने खतरामा छौँ, अब्राहामले ‘विश्वास’ गरे भनेर यसले सजिलै अब्राहामको बारेमा भन्दछ । त्यति नै हो त ?! दबाउन नसकिने समस्या भ्रष्टता हामीसँग समस्याको रूपमा छ र युगौँदेखि हाम्रो प्राकृतिक झुकाव जटिल अनि कठीन धर्म, प्रयासहरू, पूजाहरू, नैतिकताहरू, तपस्वी कर्मकाण्डहरू, शिक्षाहरू आदि—धार्मिकताको प्राप्त गर्नको लागि देखिने गरेको छ । तर यो अब्राहाम भन्ने व्यक्तिले भने उपहारको रूपमा दिइएको धार्मिकता सजिलै उहाँमाथि ‘विश्वास’ गरेर प्राप्त गरे । यो धेरै साधारण थियो जसलाई हामी गुमाउँन सक्छौँ ।
अब्राहामले धार्मिकतालाई ‘कमाएन’; तर यो उसलाई ‘थपिइएको’ वा दिइएको थियो । त्यसोभए फरक के हो त? ठीक छ, यदि केही कुरा ‘कमाइन्छ’ भने तपाईँले यसको लागि मेहनतले काम गरेको हुनुपर्छ—अनि यसमा तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ । योचाहिँ तपाईँले गरेको कामको ज्याला पाएजस्तो हो । तर केही कुरा तपाईँलाई थपिइन्छ भने त्योचाहिँ तपाईँलाई दिइएको हुन्छ । जसरी कुनै उपहार स्वेच्छाले दिइन्छ भने त्यो कमाइएको हुदैन र यसमा योग्य पनि हुदैन, तर यो सामान्यत प्राप्त गरिन्छ ।
परमेश्‍वरको अस्तित्वमाथि विश्वास गरेर, वा प्रशस्त असल र धार्मिक क्रियाकलापहरू गरेर धार्मिकता प्राप्त गरिन्छ भन्ने सोचाइबाट हामीमा धार्मिकताको बारेमा भएको साझा बुझाईलाई यो अब्राहामको वृतान्तले उल्टो पारिदिएको छ । यो अब्राहामले लिएको बाटो होइन । उनले परमेश्‍वरद्वारा उनलाई दिइएको प्रतिज्ञाप्रति विश्वास गर्ने कामलाई छानेको कारण उनलाई धार्मिकता थपिइयो वा दिइयो ।
बाइबलको बाँकि भागले हाम्रो लागि एउटा चिन्हको रूपमा यस जम्काभेटलाई उपयोग गर्दछ । परमेश्‍वरको प्रतिज्ञाप्रति अब्राहामको विश्वास, र प्रदान गरिएको धार्मिकताको परिणाम हामीले अनुशरण गर्नको लागि हामीलाई दिइएको एउटा पद्धति हो । सम्पूर्ण सुसमाचारको भाग हामीहरूमध्ये सम्पूर्णलाई परमेश्‍वरद्वारा दिइएको प्रतिज्ञामाथि आधारित छ । तर त्यसोभए धार्मिकता कसले पाउँदछ वा कमाउँदछ त ? यसबारेमा हामी हाम्रो अर्को लेखमा हेर्नेछौँ ।
लेखक Ragnarप्रकाशित 04/12/2016 14/06/2020 श्रेणिया बाइबल (वेद पुस्तकहरू) मार्फत यात्रा - Through Bibleटैग्स pujas बाइबल बाट प्राप्त गर्न अब्राहामको धार्मिकता, अब्राहाम र ज्योति, अब्राहाम र धार्मिकता, कर्म कसरी बच्ने, कसरी moksha, बाइबल moksha